Amaculo AmaNgqina KaYehova—Umculo Ngeelwimi Ezininzi
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiFante IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHausa IsiHebhere IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMingrelian IsiNgesi IsiNorway IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiRarotonga IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTarascan IsiTigrinya IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUrdu IsiValencian IsiXhosa IsiYoruba IsiZapotec (saseLachiguiri) IsiZulu isi-Igbo
Umculo Ngeelwimi ezininzi
Kunzima ukuguqulela ingoma kolunye ulwimi, kuba nzima ngakumbi xa iculo lineengoma eziyi-135.
Kwiminyaka nje emithathu amaNgqina kaYehova aye awenza kakuhle lo msebenzi wokuguqulela zonke iingoma ezikwincwadi yamaculo enomxholo othi, Culela UYehova kwiilwimi eziyi-116. Ukongezelela, ezinye iilwimi eziyi-55 ziye zafakela iingoma eziyi-55 zeli culo. Ezi ngoma ziseza kuguqulelwa nangezinye iilwimi.
Ukuguqulelwa Nokubhalwa Kwala Maculo
AmaNgqina kaYehova sele eguqulela uncwadi lweBhayibhile phantse ngeelwimi eziyi-600, yaye ezimalunga neziyi-400 zifumaneka kwi-intanethi. Kodwa ukuguqulela amaculo bekunzima. Ngoba? Kuba ezi ngoma ziculwa ngendlela efanayo nangona ziculwa ngeelwimi ezininzi.
Ukubhala amaculo akufani nokubhala imagazini. Ngokomzekelo, xa kuguqulelwa iMboniselo kolunye ulwimi, abaguquleli bazama ukuguqulela yonke into ethethwa sisiNgesi ngendlela echanileyo. Kodwa ukuguqulela iingoma yenye into.
Indlela Ekuye Kwenziwa Ngayo
Abaguquleli bamaculo baye basebenzisa indlela eyahlukileyo yokuguqulela ngenxa yokuba kufuneka icace eyona nto ithethwa ngamazwi, athandeke yaye kube lula ukuwakhumbula.
Kufuneka amazwi engoma yokudumisa abe lula kangangokuba umntu owaculayo akhawuleze ukuyibona eyona nto athetha ngayo. Kulwimi ngalunye, amazwi kufuneka ahlangane yaye aculwe ngokutyibilikayo ngokungathi ngawaloo mntu uwaculayo.
Abaguquleli baye bakwenza njani oku? Endaweni yokuguqulela igama negama ngokusuka ngqo kwisiNgesi, abaguquleli baye bayalelwa ukuba babhale ngokutsha amazwi ezi ngoma ngendlela eza kwenza zidlulisele imfundiso neemvakalelo ezifanayo nezesiNgesi. Njengoko bebesenza konke okusemandleni ukuba bangaphum’ ecaleni kwimfundiso yeziBhalo, abaguquleli baye basebenzisa amagama aqhelekileyo, aqondwayo nakhunjulwa ngokulula.
Inyathelo lokuqala kukuguqulelwa kwegama negama leculo lesiNgesi. Emva koko, iNgqina elinobuchule ekubhaleni iingoma liye labhala la mazwi aguqulelweyo ngendlela eza kuwenza abe nomtsalane, kwangaxeshanye ivakale into ayithethayo. Ukuze la maculo adlulisele imfundiso echanileyo engokweziBhalo, iqela labaguquleli liye lawahlolisisa.
Ehlabathini jikelele, amaNgqina kaYehova aye akakwazi ukuzibamba yimincili xa ebefumana la maculo matsha, yaye kulindelwe ukuba aguqulelwe nakwezinye iilwimi.
Ividiyo: “Nantsi Indlela”